आवाज नेपाल, April 8, 2020
नयाँ कोरोनाभाइरसले लगाउने रोग कोभिड–१९ को आंतक विश्वभरि व्याप्त छ । अहिले लाखभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने को मृत्यु भइसकेको छ । संक्रमितमध्ये जति चाहिँ निको भएर घर फर्किसकेका पनि छन् । करिब तीन महिनाअघि अर्थात् गत वर्षको डिसेम्बरको अन्त्यतिर चीनको हुबेई प्रान्तको ऊहानबाट देखापरेको यो रोगको अहिलेसम्म कुनै उपचार पत्ता लागेको छैन । […]
आवाज नेपाल, September 12, 2019
१. प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने गर्नाले शरीरका बिकार तत्व बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ र त्वचा आकर्षक र सुन्दर बन्छ । २. अनुहार गर्दनका साथै हात खुट्टामा मस्चराइजर गर्नुहोस् यसले तपाइँको छालामा भएको चाउरीपन हटाउन मद्दत गर्छ । ३. नियमित रुपमा सफा पानीले अनुहार धुने गर्नुपर्छ । दिनमा कम्तिमा ३ देखि चार पटक फेशवासले अनुहार धुने […]
गर्मी मौसममा तिर्खा मेटाउन चिसो पानी पिउन सबैलाई मन पर्छ तर धेरै चिसो पानी पिउनु शरीरका लागि नकारात्मक असर पर्न सक्छ । गर्मी मौसममा प्राय सबैको घरमा फ्रिजमा राखिएको पानी पिउने चलन हुन्छ यसले शरीरलाई फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी गर्छ । यसका बेफाइदाहरु के – के रहेछन् : १. धेरै चिसो पानी पिउनाले रक्तनलीहरु खुम्चिन्छन् […]
एजेन्सी – गर्मी लागेसँगै पेयपदार्थको माग पनि बढ्छ । गर्मीमा ताजा रहन र शितलता प्राप्त गर्नको लागि मानिसहरु विभिन्न प्रकारका चिसो पेयपदार्थ पिउने गर्छन् । घरमा पनि सजिल्यै बनाउन सकिने कतिपय पेयपदार्थहरुले उर्जासँगसँगै शरीरमा पोषक तत्व पनि प्रदान गर्छ । चिसो बनाइएकोे पेय पदार्थ र विभिन्न बजारमा पाइने पेयपदार्थ सेवन गर्दा शरीरमा नकारात्मक असर परिरहेको […]
आवाज नेपाल, April 6, 2019
सुन्तलामा प्रसस्त मात्रामा पौष्टिक तत्वहरु पाईन्छन् । त्यसमध्ये एक भिटामिन सी हो जुन कोलाजीन नामक छालाका रेसाहरु बनाउन चाहिन्छ । यति नभई सुन्तलाको रस र बोक्राले छालामा मालिस गर्नाले छालाको प्वालमा जम्मा भएका फोहर हटाई छाला स्वस्थ राख्दछ । स्याउ : छालामा चमक ल्याउन स्याउको एकदम ठूलो भूमिका हुन्छ । यसमा हुने करि र भिटामिन […]
आवाज नेपाल, April 4, 2019
तपाईं महत्वकांक्षी हुनुहुन्न । धेरै बोल्ने स्वभावको पनि हुनुहुन्न । अरुसँग सजिलै घुलमिल गर्न सक्नुहुन्न । खर्चिलो पनि हुनुहुन्न । के त्यसो भए तपाईं असमाजिक हो ? के तपाईं कमजोर हो ? के तपाईं कञ्जुस हो ? के तपाईं गंभीर हो ? पक्कै होइन । तपाईंका यी स्वभाव एवं आनीबानी आफैमा खराब होइन । न […]
आवाज नेपाल, January 29, 2019
यदि तपाईं सुन्दर, निखारिएको छाला चाहनुहुन्छ भने दुधको तरले तपाईलाईं निकै फाइदा पुर्याउँछ । जाडोयाममा छाला रुखो हुने, दाग धब्बालगायतका समस्या देखापर्छ । तर स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ तर धेरै फ्याट हुने भएकाले धेरै मानिसहरु यो खाँदैनन् । तर छालाको समस्याका लागि तपाईंले तर खाने होइन, लगाउने गर्नुपर्छ । छालाको लागि सबैभन्दा राम्रो मोइस्चुराइजरः […]
१ हिँड्नु प्रत्येक दिन १० देखि ३० मिनेट हिँड्ने गर्नुपर्छ । हिँडाइले शरीरमा ताजापन दिन्छ । जसले मन शान्त हुन्छ । शरीर स्वस्थ रहन्छ । २ मौन रहनु दैनिक जीवनको भागदौडबाट १० मिनेट समय निकालेर मौन बस्नु शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ । पलेटी कसेर आँखा चिम्म गरी १० मिनेर मौन बस्नु उत्तम । ३ प्रार्थना […]
१. श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त महिन्दा राजापाक्षेले पदबाट राजिनामा कहिले दिनुभएको हो ? सन् २०१८ डिसेम्बर १५ – राजापाक्षेलाई सिरिसेनाद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको र संसद् विघटन गरिएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध भएको फैसला गरेपछि उहाँले राजिनामा दिनुभएको । – सर्वोच्च अदालतका सात जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय […]
आवाज नेपाल, December 27, 2018
लामो समयसम्म बाँच्ने सबैको चाहना हुन्छ । कति लामो बाँच्ने भन्ने पूर्णतः आफ्नो हातमा नहोला ! यद्यपि के आफ्नो जीवनको आयु लम्ब्याउन तपाईंले कहिल्यै केही सोच्नुभएको छ ? यदि छैन भने अब यस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिन सक्नुहुनेछ : सुखी र लामो जीवन चाहनुहुन्छ भने तनावबाट टाढा रहन आवश्यक हुन्छ । किनभने, तनावको स्नायुसम्बन्धी रोगसँग सीधा […]